Ukuqubuka kwe-Corona sekushaqise isigodi sonke | Scrolla Izindaba
Ukuqubuka kwe-Corona sekushaqise isigodi sonke
Yisikhathi sokuvuna eLugangeni isigodi esise-Mount Frere eMpumalanga Kapa, ​​kepha yonke indawo ohamba kuyo izakhamuzi zigqoke izifonyo futhi zishaqekile ngezindaba zokuthi bangaphezu kwama-200 abafundi besikole sasendaweni esizimele abahloliwe, batholakala ukuthi banegciwane le-coronavirus.
Ukwesaba sekwengamele isigodi esinokuthula futhi nempilo ejwayelekile isamile kancane.
Ngalesi sikhathi sonyaka izakhamuzi kulesi sigodi zivuna ummbila ophuzi ezingadini nasemasimini omphakathi, ngesikhathi amadoda angasebenzi ethola imisebenzi yezikhathi ezithile njengamaphrojekthi okulima ummbila endaweni.
Ngesikhathi sihambele lesi sigodi ngoLwesihlanu mhla zi-19 kuNhlangulana, inkosi yasesigodini ibize zonke izakhamuzi ukuba zihlanganyele esikoleni samabanga aphansi lapho umnyango wezempilo wenze khona ukuhlolwa komphakathi.
Abafana abafunda e-Makaula Senior Secondary School, kubalwa abafundi abangama-204, abasizi basehostela kanye no-matron kutholakale ukuthi sebehaqwe igciwane le-corona, beqa emagcekeni esikole bahamba baya endaweni yokucima ukoma eseduze nesikole.
UNgqongqoshe Wezemfundo e-Eastern Cape uFundile Gade uthe okubakhathaza kakhulu ngukuqubuka kwegciwane le-covid -19 kuleli dolobhana.
Uthe abafundi abalahlekile bebevele benecala lokunye ukuqubuka kwegciwane le-covid-19 kwesinye isigodi.
“Manje kunesikole esinokuthelelana ngenxa yomfana oyedwa kulaba abeqa, babehambele umqhudelwano kuleyo ndawo ngakho-ke ngenxa yalokho bathelela cishe bonke abafana ababedlala nabo kuleso sigodi.
“Ngakho-ke kuzoba nohlelo olukhulu lokuqinisekisa ukuthi siyababuyisa kanye nohlelo lokulandela labo bantu abanegciwame. Njengamanje ukukhathazeka kwami ​​okukhulu ilokhu.”